नेकपा फुटको अन्तिम तयारी : कुन समूहमा को ? (नामावलीसहित) – साँचो खबर
नेकपा फुटको अन्तिम तयारी : कुन समूहमा को ? (नामावलीसहित)
६ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई समूहले मंगलबार बेग्लाबेग्लै स्थान र समयमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् । दुई समानान्तर बैठकहरु नेकपा विभाजनका लागि औपचारिक प्रस्थानविन्दु हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि दुई समूह एकै ठाउँमा बस्नसमेत सकेका छैनन् । दुबै समूहले सोमबार आ-आफ्नो पक्षका संघीय सांसदहरुको भेला गरेका छन् । र, यसैको सिलसिला अन्तरगत मंगलबार समानान्तर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ ।
दुबै पक्षको तयारी हेर्दा सत्तारुढ नेकपामा फुटले मंगलबार औपचारिक पाउने निश्चित जस्तै देखिन्छ । यद्यपि प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले आफूहरुले फुटको घोषणा नगर्ने बताएको छ । ‘अनुशासन उल्लंघनमा अध्यक्ष ओलीमाथि कारबाही गर्ने प्रस्ताव छ, तर हामीले पार्टी फुट भन्ने पक्षमा छैनौं’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तर्मा एक नेता भन्छन्, ‘बहुमत केन्द्रीय सदस्य हामीसँग नै छ, हामी नै आधिकारिक रहन्छौं ।’
बहुमत केन्द्रीय सदस्यको साथ पाएको प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षको पनि आफ्नै तयारी छ । भोलिको केन्द्रीय कमिटीले स्थायी कमिटीको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए ।
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बोलाएको बैठकलाई अबैध भनेका ओलीले सम्भवत मंगलबार केन्द्रीय कमिटीबाट केही नेताहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछन् ।
ओली निकट नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, बैठकले गर्ने निर्णयबारे ठोस केही तय भइनसकेको बताउँछन् । ‘हाम्रा केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक बस्दैछ । तर, थप के गर्ने भन्ने त्यही तय हुन्छ’, स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङ भन्छन् ।
तर, उक्त समूहका अर्का एक नेता भने प्रचण्डमाथि कारबाही गर्ने तयारी भएको बताउँछन् । ती नेता भन्छन्, ‘पार्टी विधान विपरीत लगातार बैठक राखिरहनुभएको छ । दुई अध्यक्षको सहमति हुनुपर्नेमा एकतर्फीरुपमा भेला र बैठक राख्नु कार्वाहीको विषय हुन्छ ।’
ओली पक्षले प्रचण्डलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ भने प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले त स्थायी कमिटीबाटै निर्णय गराइसकेको छ । ‘असंवैधानिक र अराजनिक निर्णय लिएर पार्टी र आन्दोलन नै सिध्याउने कदम चालिएपछि स्वभाविक रुपमा स्थायी कमिटी बैठकले कारबाहीको सिफारिस गर्ने नै भयो । अब केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ’, प्रचण्ड पक्षका स्थायी कमिटी नेता बेदूराम भुसाल भन्छन् ।
केपी ओली पक्षमा केन्द्रीय समितिका अल्पमत सदस्यहरु सहभागी हुने अहिलेसम्मको समीकरणले देखाएको छ । प्रचण्ड-माधव पक्षले आफूमाथि कारवाही गर्ने तयारी गरेपछि केपी ओलीले पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर प्रचण्डलाई नै पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाएको घोषणा गर्न सक्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
त्यसो त सोमबार बिहान बालुवाटारमा आयोजना गरिएको आफ्नो पक्षका सांसदहरुको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन नहुने तर पूर्वसमूहहरु अलग हुन सक्ने तर्क गरेका छन् । ओलीको यो तर्कअनुसार बालुवाटारको बैठकले नेकपाको एकता भंग भएको घोषणा गर्न सक्छ । र, यसो गर्नका लागि पूर्वएमालेको बहुमत आफूसँग रहेको ओली पक्षले दाबी गर्न सक्ने सो समूहका नेताहरु बताउँछन् ।
यस्तो दाबी गर्नका लागि पूर्वएमाले अढाइ सय सदस्यहरुमध्ये आफूसँग करिब डेढसय सदस्य रहेको दाबी ओली पक्षका नेताहरुको छ । त्यसमा पूर्वमाओवादीका लेखराज भट्टलगायतका केही नेता थपिए पनि पूर्वसमूहलाई मान्यता दिने हो भने उनीहरुलाई गणपूरक मान्न नसकिने नेताहरु बताउँछन् ।
तर, अहिले नेकपा एमालेको अस्थित्व नरहेको र निर्वाचन आयोगमा नेकपाले वैधानिकता पाइसकेको अवस्थामा एमालेको भेला बोलाएर बहुमत छ भन्दा त्यसले बैधानिकता नपाउने माधव नेपाल पक्षका नेताहरुको तर्क छ । प्रचण्ड माधव पक्षले सोमबार नै निर्वाचन आयोगमा पुगेर केपी ओलीमाथि कारवाही गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णय दर्ता गरिसकेको छ ।
अहिलेसम्मको अंकगणितलाई हेर्दा नेकपाको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैमा अध्यक्ष ओली अल्पमतमा परिसकेका छन् । तर, उनले आफू पार्टीको पहिलो अध्यक्ष भएकाले बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने अधिकार आफूलाई मात्र भएको तर्क गर्न थालेका छन् ।
निर्वाचनमा आयोगमा रहेको रेकर्डअनुसार नेकपाको केन्द्रीय समितिमा कुल केन्ऽीय सदस्यहरुको संख्या ४४१ रहेको छ । पार्टी विभाजनले बैधानिकता पाउनका लागि यो संख्याको बहुमत अर्थात २२१ सदस्य देखाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेको समीकरण अनुसार केपी ओलीको पक्षमा १४० को हाराहारीमा केन्द्रीय सदस्यहरु मात्र छन् । यो संख्या भनेको करिब ३२ प्रतिशत मात्र हो । दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटीमा र संसदीय दल दुबै ठाउँमा ४० प्रतिशत कटाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो त केपी ओलीले पूर्वमाओवादी नेता बादलले साथ दिने अनुमान गरेका थिए । तर, सोमबार बसेको बादल समूहको भेलाले ओलीको कदमलाई प्रतिगामी ठहर गरेको छ । यसले गर्दा ओलीले बादल समूहका करिब डेढ दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरुको साथ गुमाएका छन् ।
पछिल्लो समीकरण अनुसार प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या झण्डै ३ सय (२९७) रहेको छ । यो स्थितिमा केन्द्रीय कमिटीको बैधानिक अधिकार आफूहरुसँगै रहेको भन्दै प्रचण्ड-माधव समूह ढुक्क देखिएका छन् ।
यसैवीच, केही सदस्यहरु उताउता लाग्ने क्रम पनि जारी नै छ । सोमबार शेरबहादुर तामाङ माधव नेपाल समूहबाट ओली समूहतिर लागेका छन् भने ओली समूहमा रहेका रघुवीर महासेठले माधव नेपाललाई साथ दिने वचन दिएका छन् ।
केपी ओली समूहले आफ्नो गुटलाई साथ दिने आश गरे पनि अन्तिम घडीसम्म सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले पनि कुनै गुटमा नलाग्ने बताएका छन् । त्यस्तै पूर्वमाओवादीका हरिबोल गजुेलले पनि गुटमा नलाग्ने बताएका छन् । ओली पक्षका कृष्णप्रसाद दाहालसहितका केही नेताहरुले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेका छन् ।
नेकपाका कतिपय नेताहरु तटस्थ भूमिकामा उभिने संकेत देखिएको छ । जस्तो बादल, वामदेव र हरिबोल गजुरेल अहिलेसम्म तटस्थ देखिएका छन् । तर, उनीहरुले ओलीलाई साथ नदिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । ओलीले गरेको संसद विघटनबाट रुष्ट रहेका नेताहरु तटस्थ बस्ने निर्णय गर्दा ओली पक्षका सदस्यहरु थप घट्ने तर प्रचण्ड-माधव पक्षको बहुमत भने कायमै रहने नेताहरु बताउँछन् ।
यस्तो छ नेकपा केन्द्रीय समितिको समीकरण-
प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ, गणेश शाह, गिरिराजमणि पोखरेल, चक्रपाणि खनाल, जनार्दन शर्मा, देवप्रसाद गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाल, बर्षमान पुन, मणिचन्द्र थापा, मात्रिकाप्रसाद यादव, लीलामणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, हरिबोल गजुरेल, अमिक शेरचन, पेशलकुमार खतिवडा, अजयशंकर नायक, ओनसरी घर्ती, बालकृष्ण गैरे (किसान शर्मा), कुलप्रसाद केसी, कृष्णप्रसाद सापकोटा, खिमलाल देवकोटा, गिरीधारीलाल न्यौपाने, गोपाल ठाकुर, चूडामणि खड्का, जयपुरी घर्ती, जीवन गौतम, ज्वालाकुमारी साह, टेकबहादुर बस्नेत, डिलाराम आचार्य, तारामान स्वाँर, तेजबहादुर वली, दलजित विक श्रीपाइली, दिनेश पन्थी, दिलिप महर्जन, दीपबहादुर योन्जन, धर्मशीला चापागाइँ, नरबहादुर विष्ट, नरेश भण्डारी, एकचन्द्र बराल (निर्मल), नेपबहादुर थारु चौधरी, परशुराम रम्तेल, पासाङ शेर्पा, अञ्जना बिसंखे, अशोककुमार मण्डल, ओमनाथ ढुंगाना (ओम शर्मा), कालीबहादुर मल्ल, कृष्ण केसी, खगराज भट्ट, जगप्रसाद शर्मा, झक्कुप्रसाद सुवेदी, टेकबहादुर बलम्पाकी, डोरप्रसाद उपाध्याय, दीपेन्द्रकुमार पुन मगर, धीरेन्द्र शर्मा, नारायणप्रसाद पौडेल, अमरबहादुर गुरुङ तमु, ईन्द्रबहादुर आङ्बो, कुमारप्रसाद पौडेल, केशव नेपाल, गणेशमान पुन, गंगा कार्की, जोखबहादुर महरा, झकबहादुर मल्ल, डाचाराज वाग्ले, दामाकुमारी शर्मा, दीनानाथ शर्मा, दुर्गा जयन्ती राई, नरेन्द्रबहादुर कुँवर, नारायणी शर्मा, परशुराम तामाङ, पूर्णकुमारी सुवेदी, अजम्बर राई काङमाङ, अमृता थापा, अच्युतम प्रसाद काफ्ले, आशा कोइराला, ईन्द्रजीत थारु, उर्मिला अर्याल, कमलप्रसाद चौलागाई, कमला रोका, कुमारी मोक्तान, कृष्ण धिताल, कृष्णध्वज खड्का, गोपीबहादुर सार्की अछामी, गंगाकुमारी बेलबासे, गुप्तबहादुर ठकुरी, जोगकुमार बर्बरिया यादव, टंक आङ्बोहाङ लिम्बु, ताराकुमारी घर्ती, तिलकराम शर्मा, तुलराम घर्ती मगर, दधिराम न्यौपाने, दावा तामाङ, दिलिप कुमार प्रजापति, दुर्गाप्रसाद चापागाई, देवी खड्का, देवराज रेग्मी, नवीन रोका, नारायणप्रसाद दाहाल, निर्मल आचार्य, पार्वती थापा, पुष्पविक्रम मल्ल, प्रभु साह, विन्दमान विष्ट, विमला सुवेदी, वीरमान चौधरी, माधव सापकोटा, मायाप्रसाद शर्मा, युवराज चौलागाई, राजकुमार शर्मा, राजु खड्का, शिवबहादुर बस्नेत (राजेन्द्र), रामकुमार राई, रामचन्द्र झा, रामकुमारी चौधरी, रेणु चन्द, बसन्तकुमार शर्मा, विजय भण्डारी, सत्या पहाडी, समिता कार्की, सीता पोखरेल, सुनीलकुमार मानन्धर, शालिकराम जम्कट्टेल, प्रकाशहरि पोख्रेल, प्रल्हादकुमार बुढाथोकी, बलावती शर्मा, बोधमाया कुमारी यादव, महेन्द्र पासवान, मुक्तिनारायण प्रधान, युवराज दुलाल, लेखनाथ दाहाल राजन, राजेन्द्र कार्की, रामेश्वर राय यादव, रेणु दाहाल, लीलबहादुर थापामगर, बामदेव क्षेत्री, विश्वनाथ शाह, सावित्री कुमार काफ्ले, सुदन राई किराती, सुरेशकुमार आलेमगर, शदरसिंह भण्डारी, विना मगर, महेश्वरजंग गहतराज, युवराज भटट्राई, रामदीप आचार्य, लक्ष्मण पन्त, लक्ष्मीदत्त जोशी, विष्णुप्रसाद चौधरी, सन्तकुमार थारु, सुरेशकुमार राई, सूर्यप्रकाश सुवेदी, शशी श्रेष्ठ, विषमलाल अधिकारी, गजेन्द्रबहादुर महत, भरतप्रसाद शाह, मनोजजंग थापा, महेन्द्रबहादुर शाही, महेश्वर दाहाल, यसोदा गुरुङ सुवेदी, राजकाजी गुरुङ, रामप्रसाद सापकोटा, रेखा शर्मा, लेखनाथ न्यौपाने, सन्तकुमार दराई, सुकबहादुर रोका, सुरेन्द्र कुमार कार्की, शिव कुमार मण्डल, हकिकुल्लाह मुसलमान, हितराज पाण्डे, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, हरि दाहाल, हरिबहादुर चुमान, हिमाल शर्मा, हितमान शाक्य, हेमकुमार राई, त्रिलोचन भटट्, शुशिला सिर्पाली ठकुरी, श्यामकुमार श्रेष्ठ, श्रीराम ढकाल, हरिराज अधिकारी, हितबहादुर तामाङ, हेमराज भण्डारी, टंक राई, पदम राई, किरण राई, देवेन्द्र पराजुली, कल्पना धमला, कृष्णबहादुर महरा ।
माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, बेदुराम भुसाल, भीमप्रसाद आर्चाय, भीमबहादुर रावल, मुकुन्द न्यौपाने, युवराज ज्ञवाली, योगेश भटराई, रघुजी पन्त, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, अमृतकुमार बोहोरा, अरुणप्रसाद नेपाल, कमलजङग राई, कल्याणीकुमारी खड्का, कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, गौरा प्रसाईं कोइराला, गंगालाल तुलाधर, जगन्नाथ खतिवडा, ठाकुरप्रसाद गैरे, तिलकुमार मेन्याङ्बो लिम्बु, देउमान सम्बाहाम्फे, गणेशकुमार पहाडी, चूडामणि जंगली, जीवनाथ घिमिरे, खगेन्द्र चुडाल, दिलकुमारी पन्त, नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, निरजप्रसाद आर्चाय, पशुपति चौलागाई, घनेन्द्र बस्नेत, जीवनराम श्रेष्ठ, टंकप्रसाद कार्की, तुलबहादुर गुरुङ, दिनेशकुमार राई, केशवलाल श्रेष्ठ, गणेशसिंह ठगुन्ना, गोविन्दविक्रम शाह, चन्द्रबहादुर शाही, जयन्तीदेवी राई, झपटबहादुर रावल, देवशंकर पौडेल, धर्मराज निरौला, नरेश खरेल, परशुराम मेघी गुरुङ, प्रकाश ज्वाला, प्रेमलकुमार खनाल, बलदेव चौधरी, बसन्तप्रसाद मानन्धर, मदनकुमारी साह गरिमा, महेश्वर पाठक, यज्ञराज सुनवार, रचना खड्का, रविन्द्र अधिकारी (नवलपरासी), लक्ष्मण पौडेल, लालबाबु पण्डित, विश्वनाथ प्याकुरेल, सुरेन्द्र मानन्धर, सोम मिश्र, प्रमेशकुमार हमाल, विरोध खतिवडा, महेश रेग्मी, मेटमणि चौधरी, रत्नेश्वर गोईत यादव, रविन्द्र बैठा धोवी, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रामचन्द्र यादव, रामकुमारी झाँक्री, लक्ष्मणराज ज्ञवाली, लालबाबु प्रसाद यादव, सरला कुमारी यादव, प्रमोदनारायण यादव, बलवीरप्रसाद चौधरी, भागवत नेपाली, ममता गिरी, माधवप्रसाद अर्याल, यदुवंश झा, रविन कोइराला, राजबहादुर बुढा, राजेन्द्रकुमार राई, रामचन्द्र शाह तेली, लालबहादुर विक, सावित्राकुमारी भुसाल, शारदा सुवेदी, प्रतापलाल श्रेष्ठ, बलराम बास्कोटा, भाष्कर काफ्ले, राजन राई, रामकुमार ज्ञवाली, रामदयाल मण्डल, लालबहादुर थापा, विजयकुमार पौडेल, विष्णु रिजाल, सरोजकुमार यादव, सीता गिरी ओली, सुधीर शाह, सोमप्रसाद पाण्डे, शत्रुध्न महतो, श्रीनाथ बराल, सुशीला नेपाल, शेरबहादुर केसी, श्रीमाया थकाली, हरिप्रसाद पराजुली, हरिबहादुर राई, रघुवीर महासेठ ।
नभेटिने बाटोतर्फ !
नेकपा विभाजनतर्फ उन्मुख हुँदै जाँदा सोमबार बिहान सबेरैदेखि साँझ अबेरसम्म नेताहरुको दौडधुप जारी रहृयो । आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पार्टीभित्र मात्रै नभएर अन्तर पार्टी नेताहरु बीच समेत भेटवार्ता बाक्लिएको हो । लगातार दुई पक्षीय (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) गतिविधिले उतार-चढाब लिइरहेको छ ।
संसद विघटन पछि एकअर्का बीच टाढिने गरी भएको गतिविधि, निर्णय र अभिव्यक्तिले पनि भोलिको दिन औपचारिकरुपमै छुटि्टने आधार नेकपामा तयार हुने देखिन्छ । किनभने, आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेबाटै नेकपा विभाजनको रेखा कोरिएको छ । सोमबार साँझसम्मको गतिविधि, निर्णय र तयारीले पनि औपचारिक विभाजन घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको नै पुष्टि हुन्छ । राजधानी उपत्यकाको चिसो र कोरोना महामारीको कुनै प्रवाह नगरी सोमबार पनि नेताहरु तीव्र रहृयो ।
संसद विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका ओलीले हिजो साँझ मात्रै आफू निकट सांसदहरुलाई आज विहान ९ बजे बालुवाटार बोलाए । अकस्मात बोलाइएको बैठकमा ओलीले संसद विघटन हुनु आफ्नो रहर नभएको तर्क गरे । संसद विघटन गर्न बाध्य पारिएकाले अब थप कदमतर्फ तयार रहन र निर्वाचनमा केन्द्रीत हुन सांसदहरुलाई निर्देशन दिए । दिउँसो ३ बजे देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै ओलीले पार्टी विभाजन हुनेतर्फ नै संकेत दिए ।
यदि, प्रचण्ड पक्षको पनि प्रतिनिधिसभाका ९० र राष्ट्रियसभाका २४ सांसदले हस्ताक्षर गर्दै संसद पुनस्र्थापनाको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालिसकेका थिए । ओलीले जसरी कदम चालिरहेका छन्, त्यसको काउण्टर रणनीति बनाउँदै आएको यो समूहले आजै दलको बहुमत सदस्य (८७) सांसद अदालत जाने गृहकार्य गरेको थियो ।
तर, पछि दलको नभएर संसदको बहुमत सदस्य अदालत जानु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकाले अन्तर पार्टी (नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी) परामर्श गरेको छ । साँझ अबेर मात्रै छलफलबाट उठेको नेकपाको बहुमतवाला नेतृत्व भोलि केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीबारे निर्णय लिने तयारीमा छ भने अदालतमा जाने गृहकार्य पनि गरेको छ ।
मोदीले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई भेटसम्म नदिनु सामान्य शिष्टाचारका हिसाबले पनि अशोभनीय : लोहनी
Previous: ओली समूहका कार्यकर्ताले प्रचण्ड समूहको अध्यक्षलाई कार्यालयमै थुनिदिए
Next: कोरोना भ्याक्सिन कतार आइपुग्यो, बुधबारबाट खोप लगाउन थालिने
आइसक्रीममा पनि देखियो कोरोना भाइरस
खानेतेलको मूल्यमा पनि उच्च वृद्धि
ओली समूहमा प्रतिबन्ध लगाएको कालो मास्क प्रचण्ड-नेपाल समूहको कार्यक्रममा वितरण